11 | November | 2008 | Save Burma
ကျွန်တော်နှင့် ငရဲကြီး ၁၂ထပ် …
ရေးသားသူ – နေဘုန်းလတ် at Wednesday, July 25, 2007
ငရဲပြည်ကို အရှင်လတ်လတ် ရောက်သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ထဲက ဘုရားလောင်း နေမိမင်းအကြောင်းကို အားလုံး ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘုရားလောင်းနေမိမင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ပေမယ့် ကျွန်တော်လည်းငရဲပြည်ကို အရှင်လတ်လတ်လိုလို၊ အိပ်မက်လိုလိုနဲ့ ရောက်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ယုံချင်ရင်ယုံ၊ မယုံချင်ရင်လည်းနေကြပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ငရဲမင်းကြီး အမိန့်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း ငရဲပြည်က သတင်းအချက်အလက်တွေကို သိသင့်သူတွေသိစေဖို့ ပြန်ပြောပြဖို့တာဝန် ရှိနေတဲ့အတွက် အားလုံးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အဲဒီ့နေ့က … တိတိကျကျပြောရရင်တော့ အဲဒီ့ညနေကပေါ့…။ ကျွန်တော့်ကို ငရဲသားခန့်ခန့်ကြီးနှစ်ယောက်က သူတို့ရဲ့ စီးတော်ယာဉ်ကြီးနဲ့လာခေါ်သွားတယ်။ ဟိုရောက်တော့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ငရဲမင်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲဒီ့မှာပဲ ငရဲမင်းကြီးက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်…
“ မင်းကို ဒီခေါ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ ငရဲပြည်ရဲ့တိုးချဲ့ဆောင်တွေအကြောင်း လူပြည်က အချို့သောသူတွေကို သတင်းပေးချင်လို့ပဲ၊ မင်းက သတင်းထောက်တစ်ယောက် ဆိုတော့ ဒီကနေ ပြန်သွားရင် ဒီကသတင်းတွေကို လူ့ပြည်မှာ ဖြန့်ဖြူးပေးရလိမ့်မယ်။ ´´
သူကအဲဒီ့လိုပြောတော့ ကျွန်တော်က ကောင်းပြီပေါ့…။ ငြင်းစရာအကြောင်းမှမရှိတာ။ ငရဲပြည်ကနေ အခုလို အထူးဧည့်သည်တော် အဖြစ်နဲ့ ဖိတ်ခေါ်သတင်းပေးတဲ့အဖြစ်က တကယ့်ကိုဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ပဲဟာ။ အဲဒီ့လိုနဲ့ ခုနက ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်တဲ့ ငရဲသားနှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကို တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် လိုက်ပြတယ်။ ဒီငရဲတွေအကြောင်းကတော့ အားလုံးလဲ သိပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော် ထွေထွေထူးထူးပြောပြမနေတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တကယ်ပြောပြချင်တာက ငရဲပြည်ရဲ့တိုးချဲ့ဆောင်တွေ အကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ့ငရဲတွေကို ပါလာတဲ့ ကင်မရာလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ရင်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် ကြည့်လာလိုက်တာ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်က ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ ကြည့်လို့ ပြီးသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ အောက်ဆုံးထပ်ဖြစ်တဲ့ အ၀ီစိငရဲရဲ့အောက်တစ်ထပ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အခုမှ ထပ်ပြီးပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ငရဲပြည်ရဲ့တိုးချဲ့ငရဲတစ်ခုစီကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီ့ ၉ထပ်မြောက်ငရဲမှာက အလွန်မြင့်မားတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့ အလွန်နက်ရှိုင်းမတ်စောက်လှတဲ့ ချိုင်းဝှမ်းကြီးတွေ၊ တွင်းကြီးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ့ငရဲမှာ စောင့်ကျပ်နေကြတဲ့ ငရဲသားတွေကလည်း ဆူးချွန်တွေတပ်ထားတဲ့ ကြာပွတ်ရှည်ကြီးတွေကို တရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ ကြမ်းပြင်ကိုရိုက်ရင်း လက်တပြင်ပြင် လုပ်နေကြတယ်။ ကျွန်တော် တအံ့တသြနဲ့ ငေးမောနေတုန်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ဘေးနားက ငရဲသားက ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြတယ် …
“ ဒီငရဲကတော့ လူ့ပြည်မှာ လုပ်အားပေး၊လုပ်အားပေးဆိုပြီး လူတွေကို အကျပ်ကိုင်၊ အဓမ္မ စေခိုင်းခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ပဲ။ စားဝတ်နေရေးအတွက် အနိုင်နိုင်ရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေကို ရေနစ်သူဝါးကူထိုး ဆိုသလိုပဲ မတရားလုပ်အားပေး ခိုင်းနေတဲ့အဖြစ်တွေ လူ့ပြည်မှာ အခုတလော တိုးသထက်တိုးလာနေတာကြောင့် ဒီငရဲကို ငါတို့သီးသန့်ထပ်ဆောက်နေကြရတာပဲ။
အဲဒီ့မတရားစေခိုင်းတဲ့သူတွေက ဒီကိုရောက်လာရင် အဲဒီ့တောင်ကြီးတွေကိုဖြိုပြီး၊ ဟောဟိုက ချိုင့်တွင်းကြီးတွေကို ဖို့ကြရလိမ့်မယ်။ သူတို့ဖြိုပြီးတဲ့ တောင်တွေနေရာမှာတွင်းတွေ ပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီး၊ သူတို့ဖို့လိုက်တဲ့တွင်းတွေနေရာကလည်းတောင်တွေ ပြန်ဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အလုပ်ကို သူတို့မနားမနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကြရလိမ့်မယ်၊ ခဏနားလိုက်တာနဲ့ အနားမှာ စောင့်နေကြတဲ့ ငရဲသားတွေက ဆူးချွန်ကြာပွတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ် ၀ိုင်းရိုက်ကြလိမ့်မယ်။´´
ကျွန်တော်လည်း သူပြောပြတာတွေကို သေသေချာချာလိုက်မှတ်ပြီး စိတ်ထဲကနေလည်း နည်းတောင် နည်းသေးတယ်လို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်စိတ်ကျေနပ်အောင် လေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာ နောက်ငရဲတစ်ထပ်စီကိုခေါ်သွားပါတယ်။ ၁၀ထပ်မြောက်ငရဲပေါ့။ ဒီငရဲမှာကတော့ ဘာမှထွေထွေထူးထူး မရှိဘူး။ နီရဲပူပြင်းနေအောင်မီးမြှိုက်ထားတဲ့ လူတစ်ကိုယ်စာ လှောင့်ချိုင့်လေးတွေအများကြီးကိုပဲတွေ့ရတယ်။
“ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လှောင့်ချိုင့်လေးတွေက အထူးစီမံထားတာကွ၊ ဒီငရဲကို ရောက်လာမယ့်သူတွေက အဲဒီ့လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ နေရမယ်၊ အဲဒီလှောင်ချိုင့်လေးတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးသေးလာကြပြီး သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အပြင်းထန်ဆုံး ဆွဲညှစ်ကြလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲအထိ သေးငယ်ကျုံဝင်သွားရင်း သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကို တစ်ဆစ်ဆစ် နာကျင်နေစေပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက် တမြေ့မြေ့နဲ့နောင်တရနေစေလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့တော့မှ လှောင်ပိတ်ခံရခြင်းရဲ့ဝေဒနာကို သူတို့ကိုယ်ချင်းစာမိကြလိမ့်မယ်။´´
ကျွန်တော်ကတော့ သူပြောတာတွေကို နားထောင်နေရင်း သူတို့က တရားသဖြင့် ခံရတာဆိုတော့ မတရား ချုပ်နှောင် နှိပ်စက်ခံရတဲ့ခံစားမှုကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။ အဲဒီ့လိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် ငရဲတစ်ခုကို ရောက်သွားပြန်တယ်။ ဒီ ၁၁ထပ်မြောက် ငရဲမှာက ပွက်ပွက်ဆူအောင် ကျိုထားတဲ့ချော်ရည်ပူအိုးကြီးတွေ၊ ရဲရဲတောက်နေအောင် မီးကင်ထားတဲ့ သံဆူးချွန်ကြီးတွေနဲ့ လက်သန်းလုံးလောက်ရှိတဲ့ အပ်နဲ့ အပ်ချည်ကြိုး အကြီးကြီးတွေ အများကြီးကို ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘေးနားကငရဲသားကို လှမ်းမေးမယ်အလုပ်မှာပဲ သူက …
“ အဲဒီ့ချော်ရည်ပူတွေက လူ့ပြည်မှာလူတကာရဲ့ နားတွေထဲကို မဟုတ်ကဟုတ်က အတင်းအဖျင်းတွေ ဇွတ်ရောအတင်းရော ရိုက်ရိုက်ထည့်နေတဲ့သူတွေရဲ့ နားတွေထဲကို လောင်းထည့်ဖို့၊ ဟောဒီ့မီးကင်ထားတဲ့ သံဆူးချွန်ကြီးတွေက လူတကာရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဘာမှမမြင်နိုင်အောင် အာဏာတွေ၊ ပါဝါတွေသုံးပြီး လိုက်လိုက်ကာဆီးနေတဲ့ လူအချို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ထိုးဖောက်ဖို့၊ ဟောဟိုက အပ်နဲ့အပ်ချည်ကြိုးကြီးတွေကတော့ လူတွေကို ဘာဆိုဘာမှ မပြောရဲမဆိုရဲအောင် ချိန်းခြောက်တားဆီးတဲ့အပြင် မှန်တာကို ပြောပြန်ဆိုပြန်ရင်လည်း မတရားတဲ့ နည်းစနစ်တွေသုံးပြီး လူတွေရဲ့ပါးစပ်ပေါက်တွေကို လိုက်လိုက်ပိတ်ပစ်နေတဲ့ အချို့သောသူတွေရဲ့ ပါးစပ်တွေကို အထပ်ထပ်ချုပ်ပစ်ဖို့ပဲ ´´
“ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အနာဂတ်တွေဆီသွားမယ့် ခြေထောက်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်၊ မသန့်စင်တဲ့ အတ္တဆန္ဒတွေ အတွက်နဲ့ လူတကာရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း အိပ်မက်တွေကို ရက်ရက်စက်စက် ချနင်းခြေမွပစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်၊ တောမီးလောင်တိုင်း ထထပြီး လက်ခမောင်းခတ်တတ်ကြတဲ့ တောကြောင်တွေအတွက်၊ နောက်ြ့ပီး တက်လာသမျှလူတိုင်းကို တည့်အောင်ပေါင်းပြီး တောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ တသုံးလုံးကျေ လူအချို့အတွက်လည်း ခင်ဗျားတို့တစ်ခုခုစီစဉ်သင့်တယ်ဗျ …´´
ကျွန်တော် အဲဒီ့လိုအကြံပေးတာကို ငရဲသားတစ်ယောက်က သေသေချာချာ လိုက်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို နောက်ဆုံးငရဲစီကို ခေါ်သွားတယ်။ အ၀ီစိငရဲရဲ့အောက်က လေးထပ်မြောက်ငရဲ တစ်နည်းပြောရရင် ၁၂ထပ်မြောက်ငရဲပေါ့။ ရောက်ပါပြီ …။
ရောက်ရောက်ခြင်းမှာပဲ ချိုင့်တွေ၊ ခွက်တွေ၊ အချွန်အတက်တွေ၊ ပြည့်နေတဲ့လမ်းတစ်ခုရဲ့ တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ သံချွန်တွေ၊ ၀ါးရင်းတုတ်တွေ၊ တင်းပုတ်တွေ၊ မီးမြှိုက်ထားတဲ့ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေ စတဲ့စတဲ့ လက်နက်ပေါင်းစုံကိုကိုင်ဆွဲထားတဲ့ ငရဲသားတွေက တန်းစီပြီးရပ်နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကျွန်တော်စပြီး မြင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီ့မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရခြင်းမှာပဲ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ မေလ ၃၀ရက်နေ့ဆိုတဲ့ နေ့စွဲတစ်ခုရဲ့ သွေးပျက်ဖွယ်အဖြစ် အပျက်တွေက တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက် ပေါ်လာကြတယ်။ ယုတ်မာပတ်စက်မှုတံခွန်ကို ထပ်မံစိုက်ထူလိုက်တဲ့ လူ့အန္ဓတို့ရဲ့ သွေးပျက်ဖွယ် နှိပ်ကွပ်မှုတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ လူသားတွေရဲ့သွေးတွေ သမိုင်းမှာစွန်းပေခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့အကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားမိနေရင်း ကျွန်တော် မျက်ရည်ဝဲလာတယ်။
“ သံသရာဆိုတဲ့ စက်ဝိုင်းမှာ ခြွင်းချက်ဆိုတာ မရှိပါဘူးကွာ …။ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေအတွက် တစ်နေ့နေ့မှာ အားလုံး ပြန်ပေးဆပ်ရမှာပါပဲ။ ဒီငရဲကို ဘယ်လိုလူတွေ ရောက်လာမယ် ဆိုတာကိုတော့ ငါမပြောပြလဲမင်းသိနေမှာပါ…။
သူတို့တွေ ဒီကိုရောက်လာရင် ဒီလမ်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်က ငရဲသားတွေက သူတို့ကို သံချွန်တွေနဲ့ဝိုင်းထိုး၊ ၀ါးရင်းတုတ်တွေနဲ့ရိုက်၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းထု၊ နောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေကိုဆွဲပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းရဲ့မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ ၀ိုင်းဆောင့်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အစီအမံတွေပါ …´´
ငရဲပြည်ရဲ့အသစ်စီမံထားမှုတွေကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ အပြစ်တွေကျေရာ ကျေကြောင်း တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနိုင်ရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိတာနဲ့ …
“ ငရဲမင်းကြီးကို ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်၊ အားလုံးဟာ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ ငရဲကို ရောက်လာကြရမှာ မှန်ပေမယ့် ကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်စေ၊ ငယ်တဲ့အမှုကို ပပျောက်စေ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အဲဒီ့အပြစ်တွေကို သူတို့တွေ ဘယ်လိုများ လျော့ပေါ့ပစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာလေးကို ကျွန်တော်သိပါရစေ …´´
“ ကံကြမ္မာနဲ့ သံသရာ ဆိုတာကို ရှောင်လွှဲလို့မရပေမယ့်၊ မင်းပြောသလို အတိတ်က အကုသိုလ်ကံတွေကို ပစ္စုပ္ပါန် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ အနည်းအကျဉ်းတော့ ပြန်လည်ဖာထေးလို့ရပါတယ်။ ပေါက်တဲ့နှဖူး မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး မထူးဇာတ် ခင်းနေမယ့်အစား အခုအချိန်ကတည်းက နောင်တတွေရပြီး အမှန်ကိုပြင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင် သလို၊ သူတို့တွေအတွက်လည်း အပြစ်တွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြန်လည်ဆေးကြောရာ ရောက်သွားမှာပေါ့ကွာ …။ အဲဒီ့အကြောင်းကိုလည်း မင်းလူ့ပြည်ရောက်ရင် ပြောပြလိုက်စမ်းပါ။ ´´
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ကို သူတို့က လူ့ပြည်ကို ပြန်ပို့လိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ အဲဒါပါပဲ …။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေဟာ ယုံတမ်းစကားတွေပါလို့ ခင်ဗျားတို့ ယူဆချင်ရင် ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး ယုံကြည်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။
မူရင်း- ကျွန်တော် လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်
မှတ်ချက်။ ။ နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် ၂ နှစ် ၊ ဗီဒီယို အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ (ခ)၊ ၃၆ ဖြင့် ၃ နှစ် ၆ လ ၊ အီလက်ထရောနစ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃ (က)၊ ၃၈ ပုဒ်မဖြင့် ၁၅ နှစ်၊ စုစုပေါင်း နှစ်ပေါင်း (၂ဝ)နဲ့ (၆)လကြာအောင် ထောင်ချခံရသည့် ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ် အဖမ်းမခံရခင်က ရေးသားခဲ့သော ဝတ္ထုတို ဖြစ်သည်။ စူးရှပြောင်မြောက်သော အတွေးအခေါ်ဖြင့် မတရားမှုကို တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မတရား ဖမ်းဆီးခံရသော နေဘုန်းလတ်အား သူရေးသားခဲ့သောစာကို ဖော်ပြ၍ လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
နေဘုန်းလတ်နှင့်တကွ မတရား အဖမ်းဆီးခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာရန် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့။
Posted in ဝတ္ထတို
Tagged with ငရဲကြီး ၁၂ ထပ်, နေဘုန်းလတ်
88 Generation Students including Min Zeya, Jimmy, Nilar Thein, Arnt Bwe Kyaw, Panneik Tun, Mie Mie, as well as Labour rights activist Su Su Nway, musician Win Maw, HIV/AIDS activist Than Naing, etc.
More than 2100 political prisoners are currently behind bars in Myanmar. ‘Even as the government continues to claim that its new constitution and plans for …
YANGON, Myanmar — Courts in military-ruled Burma deliveredadevastating blow Tuesday to the country’s pro-democracy movement, sentencing at least two dozen …
BANGKOK: Myanmar’s military government continuedacrackdown on dissent Tuesday, handing down prison sentences of 65 years to aroundadozen pro-democracy …
By VOA News A court in Burma has sentenced at least 14 members ofawell-known pro-democracy group to 65 years in prison. Relatives and opposition political …
UPDATE: Myanmar Activists Jailed 65 Years -Family, Opposition
The military regime officially changed the country’s name from Burma to Myanmar in 1989. Some 88 Generation members, including Nilar Thein, …
Fourteen Burmese democracy activists have meanwhile been handed 65 year jail terms in Rangoon. Mostly in their 30s, they were arrested last year for their …
Activists from the 88 Generation Student Group sentenced to 65 …
Yangon (AsiaNews) – Repression against dissidents continues in Myanmar. Fourteen leading activists, including five women, from the 88 Generation Students …
Burma activists get 65-year prison terms: relatives
Relatives of some of the convicts said the members of the 88 Generation Students group were sentenced Tuesday morning byacourt in Yangon’s Insein Prison. …
Burma’s Best Given Brutal Prison Sentences
By KYAW ZWA MOE Fourteen leading activists of the 88 Generation Students group, including five women, were given 65-year prison sentences inacourt in …
By SAW YAN NAING About 40 Burmese dissidents, including Buddhist monks, members of the 88 Generation Students group,aprominent labor activist and …
The group also urges the United Nation’s Security Council to pass an effective resolution on Burma’s political crisis. January 4, 2007 – 88 generation …
Myanmar activists jailed for 65 years: family
The military regime changed the country’s name from Burma to Myanmar in 1989. Some “88 Generation” members started new demonstrations in Yangon in August …
The United Nations says at least 31 people were killed when the former Burma’s military rulers sent in troops to end the mass demonstrations led by columns …
Burmese court sentences dissidents to 65 years
A closed court in military-ruled Burma sentenced at least 11 dissidents involved in last year’s pro-democracy protests to 65 years each in prison on Tuesday …
The 88 Generation Students group were seen to be involved in the mass protests against the increased fuel prices enforced by the Burmese government in …
88 generation students sentenced to 65 years
by Mizzima News New Delhi – At least 14 prominent student activists in Burma, detained for their involvement in the September 2007 protests, …
Tagged with 65 years, 88 Generation Students, Junta, Prison
NB: Please see news about the Burmese junta’s long-term sentences on the 88 Generation Students leaders and activists in the following separate posts;
Photographer’s nightmare: ‘friend’ claimed Burmese images as his own
Journalism.co.uk, UK –
I found yet another photo of mine [from Myanmar] on his Flickr account. What really upset me about this image was the caption he wrote underneath: “So …
Satellite Images Help Aid Groups Track Atrocities
Space Com –
…aWeb site that shows before and after satellite images of areas the Washington-based human rights organization believes are, or could be at risk of, …
Tay Za Logging in Karen State
Meanwhile,asource at the New Mon State Party (NMSP) on Tuesday said that the Burmese junta and its main ally, the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), …
A state-run-newspaper The New Light of Myanmar reported that Kyaw Thu and Kin Young Il held the two countries’ third bilateral consultation meeting ata…
Suu Kyi and Cynthia Maung Win Prize
Her latest detention started in May 2003 after her convoy of vehicles was attacked by Burmese junta-backed thugs. Cynthia Maung and Zoya Phan also met with …
US Appoints Special Burma Envoy
“It is determined to help the people of Burma/Myanmar to achieve stability, prosperity and democracy and remains ready to react positively to real progress …
Observer Online, IN –
… against current human rights abuses,” Testa said. “Right now we haveamarriage of Holocaust remembrance and activism for Darfur, Burma and the Congo. …
While the members of the UN Security Council twiddle their thumbs, Burma’s pro-democracy leader Aung San Suu Kyi remains in detention, having spent more …
Bush announces nomination to new Burma post
Provision for the Special Representative position in Burma falls under the JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act, which passed in July and was …
Guest column: Veterans helped make transition peaceful
In today’s world, we find militaries commonly interfering in politics, such as in Myanmar (Burma) or formerly in Pakistan and Chile. …
Focused on the goal of restoring democratic governance to Burma, the Special Representative is to work closely with Burmese democracy activists as well as …
Dhaka-Yangon standoff lessens, but troops mobilisation continuing
Dhaka, Nov 11 (IANS) Bangladesh and Myanmar are continuing to mobilise troops along their border although the standoff over Yangon exploring oil and gas in …
Special unit hunts MIA remains
North Korea and Burma, also known as Myanmar, are two such places, Webb says. Until recently, some areas of India also were closed to JPAC. …
North Korea threatens ‘ultra-hardline’ action against Japan over …
North Korean military forces could move to stop and board Japanese ships operating in the Sea of Japan or shadow military or civilian aircraft close to its …
Burma six months on: Children and their families are still in need …
Cyclone Nargis cutaswath of destruction across Myanmar’s southern coast on 2-3 May 2008. More than 130000 people, including tens of thousands of children, …
President Bush Names Special Aide For Myanmar
The US Congress created the post to put pressure on the ruling military junta. The legislation said the special representative would work with democracy …
Stuff we like: Chickens, communists and casinos
In the mountains near the Thai-Cambodian border, the Burmese junta are turninganice profit from casinos, writes The First Post: “Because gambling is …
EU Urges Myanmar Junta To Free Political Prisoners
Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) party wonalandslide victory in 1990 elections but Myanmar’s junta never allowed them to formagovernment. …
She has been unable or unwilling to meet with the ruling Burmese junta or anyone else – refusing even to see UN special envoy Ibrahim Gambari in August, …
Travel can broaden minds and free spirits
Many people believe that last year’s protests in Burma were the result of interaction with tourists. Although the so-called Saffron Revolution didn’t havea…
Bush to name special representative for Myanmar
By AP President George W. Bush intends to nominate one of his former senior Asia advisers as special representative for the military-run country of Myanmar. …
If confirmed by the US Senate, Green “will serve as our main interlocutor with other countries and organizations as we attempt to help the Burmese people,” …
Personnel Announcement (The White House)
The President intends to nominate Michael J. Green, of Maryland, to be the United States Special Representative and Policy Coordinator for Burma with the …
Myanmar, Bangladesh Pull Back in Maritime Border Dispute
Petroleum Intelligence Weekly (subscription), NY –
A maritime border dispute between Bangladesh and Myanmar (Burma) looks to have been defused for now, with the withdrawal ofadrilling rig by South Korean …
Daewoo suspends exploration in Bay of Bengal
Daewoo had undertaken exploration in Block AD-7, backed by an agreement with Myanmar. Daewoo’s rig, the Trans Ocean Legend, was moved on Nov. …
Tensions In Bay of Bengal – Update
Myanmar , the only next door neighbour of Bangladesh other than India let the drilling rig carrying South Korean Company Daewoo Ships mobilise under Escot …
Watching the war on drugs
บางกอกโพส, Thailand –
The concerns of many human rights activists are germane. But it would be wrong to delay or cancel anti-drug campaigns at any level because one of them went …
Thai clinic heals neighbours
As the situation in Myanmar, formerly known as Burma, worsens across the border, trauma cases have become more frequent. “For us, the situation inside Burma …
WSO Renews Demand for Justice for Victims of 1984 Massacre in …
The plight of refugees in Darfur, denial of democratic rights in Burma, oppression of ethnic minorities in Congo are definitely worthy of the attention they …
Dr. Sima Samar wins Taiwan Foundation for Democracy’s 2008 Asia …
Last year’s (2007) ADHRA was presented to Burmese doctor Cynthia Maung, founder of the Mae Tao Clinic on the Thai-Burmese border. Liao Dachi, member of the …
Pro-democracy leader of Burma [Myanmar], Aung San Suu Kyi, who is currently under house arrest in her own country, receives people’s support in India. …
Sao Shwe Thaik served as the first president of independent Burma from 1948 to 1952. Burma, also known as Myanmar, isaunion formed by different ethnic …
…agenuine transition to democracy in Burma/Myanmar since the violent repression of peaceful demonstrations by the military authorities’, reports EuAsiaNews.
Bangladesh and Myanmar continue to mobilise troops along their border although the tension over Myanmar’s attempt to explore oil and gas in Bangladesh …
… seventh international against Myanmar, who had won big in the 70s when they were one of the top teams in the continent under their old name Burma. …
Bangladesh play Myanmar today in opening group A match
Bangladesh play their opening Group A match against hosts Myanmar in the six-team 3rd Grand Royal Challenge Cup that begins today (Tuesday) at the National …
Myanmar mobilises troops along Bangladesh border
Despite withdrawal of Myanmar exploration mission from Bangladesh waters in the Bay of Bengal, tension in the land border area still persists as both sides …
Bangladesh said tension with Burma defused
“This happy conclusion in the Bay isawin-win situation for both Bangladesh and Myanmar [Burma]. Peace benefits everyone,” the Foreign Advisor told the …
ITF LAUNCHES SE ASIA ACTIONS
Maritime Global Net, RI –
… in Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. It involves teams of ITF activists and representatives of seafarers’ …
Brown envisages ‘global society’
Inawide-ranging foreign policy speech Brown promised continued help for the efforts to bring peace in Darfur, Burma and Zimbabwe and said he would …
Neil Hrab: Bush the president should have listened to Bush the candidate
… Obama withdrew US forces from Iraq “only to launch new interventions in such strategically and economically irrelevant snake pits as Darfur and Burma. …
Tagged with Aung San Suu Kyi, Border dispute, Burma, Decmocracy, Freedom, Human rights, Michael J. Green, Myanmar